Sheekh Jaamac C/salaan oo ku dhawaaqay in DKMG ah ay Tahay Riddo Cambaarayna u jeediyay Jamaacada Al Ictisaam. | Halganka Online
Sheekh Jaamac C/salaan oo ku dhawaaqay in DKMG ah ay Tahay Riddo Cambaarayna u jeediyay Jamaacada Al Ictisaam.
Mas’uul sare oo katirsan Jamaacada Al Ictisaam ayaa maanta ku dhawaaqay in DKMG ah ay tahay dowlad riddo ah oo ladagaallankeedu bannaan yahay.
Kadib shir jaraa’id oo uu maanta magaalada Muqdisho ku qabtay Sheekh Jaamac C/salaan Warsame ayuu ku sheegay in uu khilaafsan yahay bayaan dhawaan kasoo baxay kooxda Al Ictisaam kaas oo sheegayay in Soomaaliya uusan ka jirin wax jihaad ah.
Sheekh Jaamac wuxuu maanta saxaafadda Muqdisho u sheegay in jihaadka ay Soomaaliya ka wadaan Shabaabul Mujaahidiin iyo Xisbul Islaam uu yahay mid xaq ah oo mudan in lagu garab galo.
Wuxuuna iska bari yeelay bayaannada u adeegaya DKMG ah iyo maamul gobaleedyada ay maalmihii lasoo dhaafay soo saarayeen Jaamacada Al Ictisaam.
Waxaan cadaynayaa in qolada Federaalka ah ay riddo ku dhacday. Markii aan baxthi dheer sameeyay waxaan ku ogaaday in dowladaasi ku dhacday riddo isla markaasina uu bannaan yahay la dagaallankeedu” ayuu yiri Sheekh Jaamac.
Sheekha ayaa intaasi raaciyay in dowladda KMG ah ay riddo ku noqotay 7 qodob oo haddii lasii faah faahiyo noqonaysa 70 qodob oo riddo ah sida uu hadalka u dhigay.
Waxyaabaha riddada keenaya ee uu sheekhu soo qaatay waxaa kamid ah Marshal Law-gii ay dowlada KMG ah soo rogtay oo uu sheegay in uu banaynayo dilka qofka muslimka ah, boobka hantida muslimiinta, kufsashadaha gabdhaha muslimaadka ah iyo waxyaabo kale.
Sidoo kale wuxuu sheegay in dowladdu ay qaadatay dimuquraadiyad oo kufri ah, tashriic kufri ah, heshiis ay suufiyo mushrikiin ah lagashay, gaalo ay ciidan ka dhigatay iyo qodobo kale oo keenaya diin ka bax.
Sheekh Jaamac wuxuu cudurdaar ka bixiyay xilligii uu ka mid ahaa culimada musaalaxada oo uu sheegay in uu wax badan ka faa’iiday islamarkaana uu ogaaday in xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay tahay xarako u halgamaysa soo celinta khilaafadii Islaamka ee la riday muddo ku dhow boqol sano ka hor.
Dadka Muqdisho oo dhan, caamo iyo culimo ayaa og in dowladdani ku dhacday riddo oo ay maalin walba gaalo ku layso muslimiinta. Kuwa Ictisaam sheeganaya ma haystaan manhajka Ahlusuna ee waa murji’o” ayuu yiri sheekh Jaamac.
Wadaadkan oo ahaa gudoomiyihii guddiga musaalaxada ee jamaacada Ictisaam ayaa shacabka Soomaaliyeed farta ugu fiiqay in dowladda KMG ah iyo xulufadeedu aysan wax dan ah uhayn shacabka Soomaaliyeed.
« Waxgaradka ku nool degmooyinka Galcad iyo Ceeldheer oo soo dhaweeyay howlgaladii ay Shabaabul Mujaahidiin ka sameeyeen Bariga gobalka G/gaduud. Wilaayada Islaamiga gobalka Banaadir oo goordhaw fulisay xukuno Islaami ah. »